Hadal uu yidhi Madaxweyne Trump oo Xiisad ka dhex-abuuray Itoobiya iyo Maraykanka | Aftahan News
Hadal uu yidhi Madaxweyne Trump oo Xiisad ka dhex-abuuray Itoobiya iyo Maraykanka
Washington / Addis Ababa (Aftahannews):- Dowladda Itoobiya ayaa ka dalbatay Mareykanka inay sharaxaad ka bixiyaan hadal ka soo yeedhay Madaxwayne Donold Trump, kaas oo la xidhiidha biyo-xidheenka Webiga Niilka ee ay Tamarta Korontada ka dhalinayso Itoobiya oo ay dhawaan bilawday dhaamintiisa.
Wasiirka arrimaha dibadda Itoobiya iyo Ssafiirka Mareykanka u fadhiya Addis Ababa
BIYO-XIDHEENKA ITOOBIYA BINAYSAY EE LA DHAAMIYEY 2020
Mr Abiy Ahmed si toos ah ugama jawaabin hadalka Trump, balse waxaa muuki shaki ah waxa ku kalifay Mr Trump hadalka uu sheegay. Dr Abiy ayaa wacad ku maray in Itoobiya ay dhameystiri doonto Biya-xireenka. “Itoobiya isma dhiibi doonto gardara noocey doonto ha ahaatee,” ayuu yiri. “Itoobiya waligeed jilbaha uma dhigan oo ma adeecin cadowgeeda, balse waxay xushmeysaa saaxibadeed, ma sameynayno maanta mustaqbalkana ma sameyn doono.”